Dowlada Maraykanka oo sheegtay inay dileen xubno shabaab ka tirsan. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Maraykanka oo sheegtay inay dileen xubno shabaab ka tirsan.
Warbixin ay soo saareen Ciidamada dowlada Maraykanka ee ku sugan qaarada Africa ee magacooda loo yaqaano Africom ayay ku sheegeen in howlgalo ay ka fuliyeen meel duleedka ka ah degmada xarar dheere ee gobolka Mudug Bartamah dalka Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-shabaab oo ay tiradoodu gaarayso ilaa lixdann dagaalame sida warka maraykanka lagu sheegay.
Duqayntaan oo dhacday habeenkii jimcihii ina dhaafay ayaa warka ka soo baxay dowlada Maraykanka lagus heegay inay qayb ka ahayd howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa maraykanka.
Waxay ku sheegen inuu ahaa howlgalkii ugu waxyeelada badnaa ee ay ku fuliyaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolka Mudug ee ay ku sugan yihiin xoogaga Al-shabaab ilaa iyo bishii November ee sanadkii 2017-dii xiligaas oo ciidamada maraykanku ay sheegen in boqol ka mid ah dagaalameyaasha Al-shabaab ay ku dileen duqaymo ay ka fuliyeen isla gobolkaasi mudug.
Warkaan ka soo baxay ciidamda maraykanka ee Africa ku sugan ayaa lagu sheegay in duqaymahaasi aysan waxyeelo gaarsiin dadka shacabka ah ee deegaankaasi ku noolaa ayna ku goobnayd fariismo muhiim ah oo ay AL-shabaab gobolkaasi ku lahaayeen.
Majiraan ilo madax banaan oo wali xaqiijiyay sheegada maraykanka ee ku aadan inay dileen ku dhawaad lixdan dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab,sidoo kale xoogaga Al-shabaab wali kamaysan hadlin warkaan ka soo baxay ciidamada Maraykanka ee ku sugan qaarada Africa ee lagu sheegay in xubno katirsan lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Tan iyo markii hogaanka dalka Maraykanka uu la wareegay madaxweyne Donld Trump waxay ciidamada maraykanku sare u qaadeen howlgalada ay ka fulinayaan fariismada xoogag shabaabku ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya.
Meelaha ugu badan ee ciidamda maraykanku ay howlgalada ka fuliyaan ee dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah gobolada Shabeelooyinka,Jubooyinka,Galgaduud,Bay iyo mudug.
← Bangiga adduunka oo ammaanay dhaqaalaha dalka
Qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo saaka xiran. →